Messi Club – Page2– Just another WordPress site
“ဘုရငျ့ရဲ့ စှဲလနျးမှုရဖို့ မိဖုရားတှေ လုပျဆောငျတဲ့ လြှို့ဝှကျနညျးလမျးမြား.”…
ရှေးခတျေက ဘုရငျရဲ့ မိဖုရားဖွဈဖို့ ခကျခဲပါတယျ။ ဒီလိုဖွဈလာရငျလညျး ဘုရငျ့စှဲလနျးမှုရဖို့ ခကျခကျခဲခဲ ကွိုးစားရပါတယျ။ မောငျးမမိဿံတှေ မြားစှာရှိတဲ့အထဲ မိဖုရားကို သဘောကြ နှဈခွိုကျဖို့ဆိုတာ မိဖုရားတှအေတှကျ အထူးတာဝနျ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့ မိဖုရားခငျြး အလှပွိုငျမှုက တခြိနျက နနျးတှငျးမှာ တကယျ့ကို အငျအားကွီးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့ အလှအပအတှကျ ဘာတှေ လုပျဆောငျခဲ့ကွလဲဆိုတာ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။ Rani Padmavati ဆိုတာ တခြိနျက Chittorgarh ဘုရငျရဲ့ အသညျးစှဲ မိဖုရားဖွဈခဲ့ပွီး သူဟာ အလှအပနဲ့ ဂုဏျသတငျး ကြျောစောခဲ့ပါတယျ။ သူမကို လိုခငျြလို့ Alauddin Khilji က ဘုရငျကို တိုကျခိုကျပွီး သူမကို သိမျးပိုကျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့ အလှအပဆိုတာလညျး လြှို့ဝှကျခကျြတခြို့ ရှိနပေါတယျ။ […]
ဟငျးခတျမှုနျ့အဖွဈ အသုံးပွုနကွေတဲ့ အခြိုမှုနျ့နှငျ့ အထူးဂရုပွုသငျ့သော အန်တရာယျ….
၁၉၀၈-ခုနှဈမှ စ၍ ဂပြနျပါမောက်ခ ကီရာနအဲ အီကဲဒါဆိုသူက ဂြုံ၊ကွံ၊ ပီလောပီနံဥ၊ ရညှေိစသညျ့ သဘာဝပစ်စညျးမြားနှငျ့ ပေါငျးစပျကာ ဂလူတာမိတျ(GLUTAMAIE)ဓာတျကို ထုတျလုပျ၍ ဆိုဒီယမျဆားတို့ ပေါငျးခံလိုကျသောအခါ ဟငျးခပျလြှငျ အရသာရှိသော MONOSODIUMGLUTAMATE) MSGချေါအခြိုမှုနျ့ကို ရသညျ။ အဆိုပါအခြိုမှုနျ့ကို အာဂြီနိုမိုတိုဟု အမညျပေး၍(AJINOMOTO) ကမ်ဘာသို့ ဖွနျ့ခြီလိုကျရာ လူသားတို့နှဈသကျစှဲလနျးသှားကွသညျနောကျပိုငျး၌ ပီလောပီနံဥစသော သဘာဝပစ်စညျးတို့ကို အသုံးမပွုတော့ဘဲ ဓာတုဗဒေနညျးဖွငျ့ အစားထိုးခဲ့သညျ ဓာတုနညျးဖွငျ့ထုတျလုပျထားခွငျးကွောငျ့ ရောဂါအမြိုးမြိုးဖွဈခဲ့ကွရသညျ။ အခြိုမှုနျ့အန်တရာယျကို ကမ်ဘာက သိလာကွသဖွငျ့ စီးပှားရေးသမားမြားက နောကျပုံစံတဈမြိုးနှငျ့ ဟငျးခပျမှုနျ့ပွောငျးလဲထုတျလုပျခဲ့သညျ တံဆိပျအမြိုးမြိုးတပျထားကွသောကွကျသားမှုနျ့တို့မှာ မူလအခြိုမှုနျ့မြားပါဝငျနသေဖွငျ့ အခြိုမှုနျ့ ကွကျသားမှုနျ့ကို ဓာတျခှဲလြှငျ မိုနိုဆိုဒီယမျဂလူတာမိတျကို တှရေ့၏။ (MONOSODIUM GLUTAMATE)ကွကျသားအနံ့ဓာတုအရောငျတငျထားသဖွငျ့ ပိုမိုအန်တရာယျဘေးဆိုးဖွဈစနေိုငျသညျ။ (ငါး၊ပုဇှနျ၊ ပွညျကွီးငါးတို့ဖွငျ့ ပွုလုပျထားသော ငံပွာရညျတို့၌လညျး အခြိုမှုနျ့ပါနသေညျ။) အဆိုပါကွကျသားမှုနျ့ကို တာရှညျစှာသုံးစှဲခွငျးကွောငျ့ […]
သငျနတေဲ့ အိမျ (သို့) အခနျးမှာ ဒီအခကျြ ( ၄ ) ခကျြ ရှိနရေငျ အမွနျဆုံးပွငျလိုကျပါ……
သင်နေတဲ့ အိမ် (သို့) အခန်းမှာ ဒီအချက် (၄)ချက် ရှိနေရင် အမြန်ဆုံးပြင်လိုက်ပါ အ ရာရာတိုင်း၊ ပစ္စည်းတိုင်းမှာ စွမ်းအင်တွေ ရှိနေပါတယ်။ သင့်အိမ်မှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေထဲမှာ သင့်အိမ်ကို လာဘ်တိတ်စေသလို၊ သင့်ကိုလည်း ဘုန်းကံနိမ့်စေတဲ့ ပစ္စည်းတွေရှိပါတယ်။ ဘာတွေလဲဆိုတာကိုတော့ ကြည့်လိုက်ပါနော်။ (၁) ရှုပ်ပွနေခြင်း သင့်အိမ်ကို ရှုပ်ပွညစ်ပတ် နေအောင်ထားတာ၊ အမှိုက်တွေ၊ ဖုန်တွေမရှင်းတာ၊ ပင့်ကူမျှင်တွေမရှင်းတာ၊ ပန်းကန်တွေမဆေးပဲ ပုံထားတာမျိုး၊ အဝတ်အစားတွေလည်း သေချာမခေါက်ပဲ ပြန့်ကျဲရှုပ်ပွနေတာမျိုးတွေ၊ ပစ္စည်းတွေက သူ့နေရာနဲ့သူရှိမနေပဲ ရှုပ်ပွ ညစ်ပတ်နေတာမျိုးတွေက သင့်အိမ်ကို လာဘ်တိတ်စေသလို၊ ဘုန်းကံနိမ့်စေပါတယ်။ (၂) အနံ့အသက်ဆိုးခြင်း သင့်အိမ်ကလေထုကလည်း သင့်အပေါ်ကို အများကြီး သက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ သင့်အိမ်မှာ အနံ့အသက်တွေ မကောင်းတာ၊ အဝတ်အစား မှိုစော်တွေနံနေတာ ဒါမှမဟုတ် အမှိုက်နံ့တွေနဲ့ […]
လူရှငျးရငျပွီးရောဆိုပွီး တှတေဲ့နရောမှာ တျောသလငျးဇာတျ ခငျးတတျတဲ့ အတှဲ မြား ကွညျ့ဖွဈအောငျကွညျ့သှားနျော….
လူရှင်းရင်ပြီးရောဆိုပြီး တွေ့တဲ့နေရာမှာ တော်သလင်းဇာတ် ခင်းတတ်တဲ့ အတွဲ များ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်သွားနော်… ဒီ ပို့စ် ဖတ်မိတဲ့ မြန်မာ မိန်းကလေး တိုင်းအမှားအမှန် သင့် မသင့် ချင့်ချိန်နိုင်ပါစေ အချစ် ဆိုနာလူသားတိုင်း မကင်းဘူး ထင်ပါတယ် အရှက်တရား ကင်းမဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်တွေက အချစ်စစ် မဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်မိမိ မိသားစု အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ နိမ့်ကျမှု့ကိုပြသပေးနေ သလိုပါဘဲ တက္ကသိုလ် ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ မိန်းကလေး အများစု သတိပြု့သင့်ပါတယ် ရဲ တွေက လူဆိုး သူခိုး ဖမ်းဖို့ထက် လူ တော်သလင်း အတွဲ တွေဖမ်းနေရသလိုဖြစ်နေတာ မကောင်းပါဘူး စိတ်ပျက်စရာပါ ရဲ aတွက အလုပ်အား အချိန်ပိုလို့ ဒီလို လိုက်ပြီး ဖမ်းဆီး ပညာပေး နေတာမဟုတ်ပါဘူး ချုံမြင်တိုး […]
သင့်ရဲ့ ကုန်ခမ်းသွားတဲ့ အားအင်တွေကို နာရီပိုင်းအတွင်း ပြည့်စေသော အစားအစာ-(၁၀)မျိုး…
သင့်ရဲ့ ကုန်ခမ်းသွားတဲ့ အားအင်တွေကို နာရီပိုင်းအတွင်း ပြည့်စေသော အစားအစာ-(၁၀)မျိုး သင့်ကို နာရီပိုင်းအတွင်း အားအင်ကိုပြည့်စေသော အစားအစာ-(၁၀)မျိုးအကြောင်းကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ဒိန်ချဉ် ထန်းလျက်နဲ့ တဖန်ခွက် သေးသေး ၊ရေခဲမပါ(၂) မုန်လာဥနီကို နွားနို့နဲ့ ဖျော် သကြားနဲနဲ ဆားနဲနဲ၊ရေခဲမပါ (၃) ကြက်ဥကာကျက်ကို ပျားရည်နဲနဲ သံပုရာတစိတ် နဲ့ရော ၊ ဆားနဲနဲ။ (၄) ငါးရှဉ့်ချဉ်စပ်၊ ငါးရှဉ့်ခြောက်စပ်၊ငါးရှဉ့်မဆလာ(မိန်းခလေးများ ငါးရှဉ့်မတည့်သူရှိ) (၅) ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီးကို ထောပတ်နဲနဲ၊ပျားရည်နဲနဲ နဲ့ ကြော်စားပါ။ (၆) ကြက်ဥနှင့် ဂတ်စ်ပါသော အချိုရည်တမျိုးကို အမြှုပ်ထအောင် ဇွန်းဖြင့်ခေါက် မွှေပါ။မွှေပြီးပြီးချင်း အမြှုပ်မငြိမ်ခင် အမြန်သောက်ပါ။ (၇) ကြက်ဥ+သံပုရာသီးတစိတ်+အိုင်ဆိုတောနစ် ပါသော အချိုရည် အနည်းငယ် ရော၍ သောက်ပါ။ (၈) […]
ကက်ဥတောင်မကြော်တက်ဘူးဂုဏ်ယူပြီးပြောနေတဲ့ မိန်းမဖျင်းတွေအတွက် လူထုဒေါ်အမာ ၏ … သဘောကျသော အမှာစကားမိန်းမဆိုတာထမင်းဟင်း ချက်တတ်ရမယ်။ ဒါဟာ အမျိုးသမီးဖြစ်လို့ မဟုတ်ဘူး။ယောင်္ကျားနဲ့ ကလေးတွေကိုချက်ကျွေးဖို့ မဟုတ်ဘူး။ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ လောကမှာအသက်ရှင် နေထိုင်ဖို့ တစ်ယောက်တည်း နေလည်း လုပ်ကို လုပ်တတ်ရမယ့် အရာဖြစ်လို့ပါ… မိန်းမဆိုတာ …ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ် တန်ဖိုးထား တတ်ရမယ်။လင်ကောင်းသားကောင်းရဖို့ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ဘဝ၊ ကိုယ့် ခံယူချက်နဲ့ကိုယ့် ယုံကြည်ချက် ရှိရှိဂုဏ်ယူစွာ ရပ်တည်နိုင်ဖို့ပါ… မိန်းမဆိုတာ …အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာတစ်ခုခု တတ်ကို တတ်ထားရမယ်လင်ယောင်္ကျားကို ရှာကျွေးဖို့ မဟုတ်ဘူး။ မည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို မှ ဘဝတစ်ခုလုံး ပုံအပ်ပြီး လောက အလယ်မှာ အားငယ်စွာ မနေထိုင်ရ ဖို့ပါ… မိန်းမဆိုတာ …အိမ်မှု့ကိစ္စ ကောင်းစွာစီစဉ် ကိုင်တွယ် နိုင်ရမယ်။ယောက္ခမနဲ့ […]
ကလေးမိဘများထံသို့ အသိပေးချက် …
ကလေးမိဘများထံသို့ အသိပေးချက် … ကလေးတွေ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မိဘတွေ သတိထားရမယ့် ကိစ္စတွေက အများပြီး ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ၃ နှစ် ၊ ၄ နှစ် အရွယ် ကလေးတွေကို မတော်တဆ အသက်အန္တရာယ် မဖြစ်အောင် စောင့်ကြည့်ရတာ တကယ်ကို မလွယ်လှပါဘူး။ ဒီလို အရွယ်ကလေးတွေဟာ ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် ဆော့တတ်လွန်းတော့ တစ်ယောက်ထည်း လွတ်ထားလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ ကလေး ဟာ တစ်ယောက်ထဲ တကုတ်ကုတ် ဆော့နေရင် ကွယ်ရာမှာ ပစ်မထားပါနဲ့။ အခုပြောပြမယ့် ကလေးငယ်လေးကတော့ မိဘတွေ မသိတဲ့အချိန်မှာ အားသွင်းတဲ့ ပလပ်ပေါက်ထဲကို ဇွန်း ထိုးထည့်မိလို့ လျှပ်စပ်ဓာတ်ကူးပြီး ဓာတ်လိုက် သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်ဟာ အရမ်းကို ရင်နာဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် […]
ဖခငျတဈဦးက သူ့သမီးကို ဂိုဒေါငျထဲမှာ ရပျထားတဲ့ ကားတဈစီးနဲ့ နှိုငျးယှဉျပွလိုကျတဲ့ ဥပမာ…
ဖခင်တစ်ဦးက သူ့သမီးကို ဂိုဒေါင်ထဲမှာ ရပ်ထားတဲ့ ကားတစ်စီးကို ပြကာ ခုလိုပြောလိုက်ပါတယ်။ သမီးကျောင်းပြီးသွားလို့ ဂုဏ်ပြု လက်ဆောင်အဖြစ် ဒီကားကို ပေးမယ်။ သမီး မမွေးခင်ကတည်းက သမီးအတွက် ဆိုပြီး ဝယ်ထားခဲ့တာ။ တခါမှမသုံးပဲ သိမ်းပေးထား တယ်လို့ ဆိုပါတယ်… ဖခင်က သမီးရေ ကားကို အပိုင်မပေးခင် ဒီကား ဘယ်လောက်တန်လဲ သိရအောင် တစ်ပတ်နွမ်း ကားဈေးတန်းမှာ သွားပြကြည့်ပါ။ သူ့သမီးက တစ်ပတ်နွမ်း ကားဈေးတန်းမှာ သွားပြပြီး အဖေရေ သူတို့က ဒေါ်လာ တစ်ထောင် ပေးမယ် လို့ ပြောကြပါတယ်တဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကားက နည်းနည်းဟောင်း နေလို့တဲ့။ ဒါနဲ့ သူ့အဖေက သမီးရေ အပေါင်ဆိုင်ကို သွားပြကြည့်ပါအုံးလို့ ခိုင်းပြန်ပါတယ်။ သမီးက အပေါင်ဆိုင်ကို သွားပြခဲ့ပြီး […]
၃၆၆ မိုင် ၃ ဖာလုံ ( သို့မဟုတ်) ခရီးသွားများ သတိထားရမည့် ရန်ကုန် မန္တလေးအမြန်လမ်း
၃၆၆ မိုငျ ၃ ဖာလုံ ( သို့မဟုတျ) ခရီးသှားမြား သတိထားရမညျ့ ရနျကုနျ မန်တလေးအမွနျလမျး ရနျကုနျ-မန်တလေး အမွနျလမျး ခရီးသှားမြား သတိထားဖို့ပါ ၃၆၆ မိုငျ ၃ဖာလုံ ( သို့မဟုတျ) မိတျဆှတှေအေတှကျ သိနပွေီးသား ဖွဈနိုငျပမေဲ့ တနှဈတဈခေါကျလောကျ ရုံးပိတျရကျ အလညျသှားမဲ့ မိတျဆှတှေေ မသိတဲ့ နရောလေးတှရှေိခဲ့ရငျ အသုံးဝငျခဲ့ရငျ လကျညောငျးရကြိုးနပျပါပွီ။ ဒီမိုငျတိုငျ ( ၃၆၆/ ၃ မိုငျ )အတှငျးမှာ နရောတှေ အမြားကွီးပါ ။ ဒီထဲက ကနြျော မှတျသားထားတာလေးတှေ ခေါငျးစဉျတဈခုဆီအောကျမှာ ဖျေါပွပေးထားပါသညျ ။ ၁။ အကှေ့ အမွနျလမျးမှာ အရေးအကွီးဆုံးပါ ကိုယျ့အရှိနျကို မထိနျးနိုငျပဲ အိပျမငိုကျပဲနဲ့ မှောကျတာ အကှတှေ့မှောပါ ။ […]
တဈညလုံးအိပျမပြျောတဲ့အထိရငျခုနျခဲ့ရတဲ့ မိစန်ဒီရဲ့ မဂျလာဦးည
ပရိသတ်ကြီးရေ မိစန္ဒီလို့ပြောလိုက်တာ အထာကျကျRapသီချင်းလေးတွေကိုသီဆိုတတ်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့အဆိုတော်မလေးတစ်ဦးအဖြစ်တန်းသိကြမှာပါ။ သူမကတော့ဂီတလောကမှာ ကိုယ်တိုင်ရေးသီချင်းလေးတွေနဲ့အမျိုးသမီးပရိသတ်တွေကြိုက်နှစ်သက်ရတဲ့အဆိုတော်လို့လည်းဆိုရမှာပါ။ အဆိုတော်မိစန္ဒီကတော့သီချင်းကောင်းလေးတွေနဲ့အတူ ပရိသတ်လက်ခံအားပေးပြီး ဂီတနယ်ပယ်မှာ​ အောင်မြင်မှုများစွာရရှိထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုတော်မိစန္ဒီကတော့ သူမရဲ့အချစ်ရေးနဲပတ်သတ်ပြီး သူမရဲ့အသက်(၃၂)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာတရားဝင်ချပြလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သူလေးကိုတရားဝင်အလင်းပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ပရိတ်သတ်တွေအရမ်းကိုအံ့သြနေခဲ့ရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်.။ ဒီကနေ့မှာဆ်ိုရင်တော့ မိစန္ဒီက သူမဘဝရဲ့ရင်အခုန်ဆုံးနေ့ရက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ ချစ်သူလေးကသူမကိုလာရောက်တောင်းရမ်းတဲ့အကြောင်းလေးကို အခုလိုပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ ”မိစန္ဒီ ဘဝရဲ့ ရင်အခုန်ရဆုံး နေ့တွေထဲကတစ်ရက်ကို ချစ်ရတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကို ဝမျှရင်း အမှတ်တရလေးတွေ မှတ်တမ်းတင် သိမ်းဆည်း ထားပါရစေနော် 🥰🙏🙈သူအိမ်မှာ လာပြီးတောင်းရမ်းတဲ့နေ့❤မနက်အစောကြီးနိုးနေပြီး တစ်ညလုံး ကောင်းကောင်း အိပ်မပျော်.. သူ အိမ်မှာ ဈေးဗန်းလာသိမ်းတာကို ရင်တွေခုန်ပြီး စိတ်တွေလှုပ်ရှားတာပေါ့နော် ဟီး 😝🙈သမီးရဲ့ special day လေးမှာ ဝန်းရံကူညီပေးသူအားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်ရှင် 🥰🥰 love you […]